Ramadaanaaf Haa Qophoofnuu - NuuralHudaa
Ramadaanaaf Haa Qophoofnuu
Ramadaanni nutti as dhihaatee jira. Baatiin Sha’abaan Eega seene torbaan guutuuf deema. Kana jechuun ammoo Ramadaana simachuudhaaf yeroo torbaan sadihii qofatu nuu hafe jechuudha. Kanaafuu yeroo nuuf hafte tana keessatti of qopheessuun barbaachisaadha. Qophii keenya kanaaf ammoo ammuma karoorfachuu jalqabuu qabna. Kaayyoon keenya jannata Rabbii argachuudha. Jannata san argachuudhaaf ammoo ibaadaalee ji’a kana keessa jiran hunda, kan waajibaa fi kan sunnaatis hojjachuudhaaf of qopheessuu qabna.
Soomana, Salaata, Qur’aana qara’uu, du’aa’ii heddummeessuu, Sadaqachuu, toowbaa godhuu fi dalagaaleen biraatis hedduutu nu eeggata. Kanaafuu, dalagaawwan kanniin akkanumaan usnee itti seenuu hin qabnu. Dursinee karoorfachuu qabna.
1. Niyyaa keenyaa haa haarawoomsinu
Ramadaana baranaa isa bara darbee irraa xiqqoo isii haa fooyyeessinu. Salaataa, zikrii, akkasumas du’aa’ii baay’isuudhaaf of haa qopheessinu. Wantoota yeroo namaa nama jalaa guban irraa fagaatuuf haa murteessinu.
Rasuulli ﷺ Ramadaanni seenuu isaatiin dura ji’a Sha’baan keessa guyyaa heddu ni soomanu. Kunis yeroo Ramadaanni seene akka hin dadhabneef qaama ofii leenjisuudhaaf. Kanaafuu nutis guyyoota muraasa soomanuudhaan of haa qopheessinu.
Salaatni ji’a ulfaataa kana keessaa nu jala darbuu hin qabu. Jama’aan salaatuun ammoo ajrii heddu argamsiisa. Sunnaanis akka waajibaatti laallama. Kanaafuu wantoota jama’aa irraa nu shaagaluu danda’an irraa haa hobbaafannu. Haajaa taraawiha irraa nu hambisuu danda’us haala itti haa goonu. Ji’a Ramadaanaa soomanuun taraawihaan wajji tola. Kanaafuu dalagaa yeroo taraawiiha dalagnu yoo qabaanne, haga danda’ameen gara biraa haa jijjiirru.
Ramadaanni ji’a Qur’aanaati. Kanaafuu guyyaa ramadaanaa hedduu isaa Qur’aanaaf haa kenninu. Qur’aana yoo xiqqaate yeroo takka waliin gahuuf haa karoorfannu.
Rasuulli ﷺ namoota du’aa’iin isaanii fudhatama qabu keessaa tokko, du’aa’ii nama soomanuuti jedhan. Kanaafuu ji’a kana keessa, yeroo suhuraa, yeroo ifxaaraa fi yeroo sujuuda keessaa du’aa’ii heddu godhuuf haa qophoofnu. Haga Ramadaanni seenuttis, du’aa’ii ergamaan Rabbii ﷺ akkasumas sahaabonni isaanii godhaa turan haa haffaznu.
Ilmi namaa hundi badii dalaga. Irra gaariin namaa ammoo nama badii ofii irraa deebi’ee Rabbii isaa araarama gaafate. Araarama argachuudhaaf ammoo Ramadaanni ji’aa irra filatamaadha. Kanaafuu waan amma dura hojjanne hunda Rabbiin akka nuuf dhiisuuf jecha, jilbiiffannee itti boonyee araarama haa kadhannu. Ergamaan Rabbi ﷺ guyyatti yeroo heddu araarama gaafatan. Isaan badiin amma dura hojjatanii fi kan boodaatiis isaaniif dhiifame eega araarama gaafatanii, kan akka keenyaa kun hoo? Kanaafuu ji’a ramadaanaa keessa araarama irra deddeebinee gaafachuudhaaf haa karoorfannu. Yeroo itti haa goonu. Itti haa qophoofnu.
Yaa Rabbi Nama Ramadaana kana dhaqqabee Itti fayyadamu nu taasisi!
September 19, 8009 sa;aa 1:34 pm Update tahe
October 16, 2021 sa;aa 6:30 pm Update tahe